Space Pioneer: Multiplayer PvP Alien Shooter Android အတွက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Space ကိုရှေ့ဆောင်: အများအပြား PvP ဂြိုလ်သားသေနတ်သမား
Space ကိုရှေ့ဆောင်: အများအပြား PvP ဂြိုလ်သားသေနတ်သမား APK ကို
အဆိုပါ "အလွန်ဟောငျးသူငယ်ချင်းများ" update ကိုဤနေရာတွင်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အသစ်တခုလူတန်းစားစနစ်ဖြင့်လာပါတယ်။ ဤအအတန်းများအတွက်ဘာတွေလဲ? ကောင်းပြီသူတို့ကသငျသညျသစ်ကို RPG ဂိမ်း playstyles ပေးပါ။ multiplayer PvP (deathmatch) တွင်သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက် outplay ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောစာရင်းဇယားများနှင့်လက်နက်အကွိုကျ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ Coop အတွက်ကြောင်း၏ထိပ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီလူတန်းစားသင့်ရဲ့အမှုထမ်းအားလုံးကိုကစားသမားကိုအကျိုးသက်ရောက်သည့် upgrade passive ဆုကြေးငွေအစုတခုရှိပါတယ်။ , ပိုမြန်သင့်ရဲ့အာကာသအဖွဲ့ Make ပိုပြီးခံနိုင်ရည်, etc ...
အာကာသက, အဆုံးမဲ့နယ်စပ်... နောက်ဆုံးအရေးယူစစ်ပွဲဂိမ်းတစ်ခု intergalactic ဂြိုလ်သားသေနတ်သမားအဖြစ်ကတော့ galaxy Explore ။ သစ်ဂြိုဟ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ Interstellar ကမ္ဘာည့်ကျဇယားများနှင့် Vivid ဂိမ်းများအားဖြင့်ဒီသစ်ကိုအထက်မှအောက်သို့ဂြိုလ်သားသေနတ်သမားများနှင့်အရေးယူ RPG အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပါဝါလက်နက်နှင့်ဂီယာနှင့်သင်၏လမ်းအတွက်မတ်တပ်ရပ်မဆိုကျူးကျော်ဆီး။
"ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလွှတ်ပေး၏အတိအကျတဦးတည်း" -5/ 5, ထိုရက်သတ္တပတ်၏ TouchArcade ဂိမ်း
"အာကာသရှေ့ဆောင်ပျော်စရာပဲတစ်ရွားလှတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်" - 8 / 10, PocketGamer ငွေချီးမြှင့်
DISCOVER သစ် Galaxy & Incredible ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်
ဘယ်အချိန်မှာအာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးနှင့်စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာဂိမ်းတွေ့ဆုံရန်။ Explore နှင့်အောင်နိုင်တဲ့အာကာသစွန့်စားမှုအပေါ်ထူးဆန်းတဲ့သစ်ကိုကမ္ဘာကသင်၏ trusty စက်ရုပ်မိတျဆှေနှငျ့ကျူးကျော်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ သင်ဤ aventure ဂိမ်း RPG အတွက်ဂြိုလ်သားကျူးကျော်ရပ်တန့်ရန်ရှိသည်!
သင်ရေခဲ tundra ထံမှအနီရောင်အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့မဟုတ်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အာကာသ Odyssey အပေါ် intergalactic သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များနှင့်အတူ brimming စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောတောထဲတွင်အသစ်ဂြိုလ်ကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လမ်းစေအဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်စေ။ ဒီစိတျလှုပျရှားစရာဂြိုလ်သားသေနတ်သမားစစ်ပွဲဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှအလှည့်မှာရန်သူများကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်န့်အသတ်ပါဝါရ!
ဂြိုလ်သားများနှင့်ကျူးကျော်၏အလုံးအရင်းကနေတဆင့်လုပ်, သင်ကကျွမ်းကျင်, စွယ်စုံအာကာသမုဆိုးရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ အစာရှောင်ခြင်းအထက်မှအောက်သို့ရိုက်ကူးလုပ်ဆောင်ချက်ကို max ကိုရန်သင့်တိုက်ခိုက်ရေးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုစမ်းသပ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဤ action စစ်ပွဲဂိမ်းထဲမှာ, သင်သည်သင်၏အစောင့်ချကြကုန်အံ့ဘယ်တော့မှမည်!
အဆိုပါအဆုံးမဲ့ဝဠာကိုစူးစမ်းလေ့လာ & တစ်ဦးအာကာသသေနတ်သမားသို့လှည့်ရန်မရေမတွက်ရန်လိုနဂါးငွေ့တန်းရှိပါတယ်။ စုံလင်သောအာကာသ Odyssey - တစ်ပြောင်းလဲနေသော invaison ရည်ရွယ်ချက်များစနစ်ဖြင့်ပေါင်းလိုက်သောအခါအဆိုပါဂိမ်း Space ကိုရှေ့ဆောင်အတွက်အမှန်တကယ်အဆုံးမဲ့ပါ!
ဤ action ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာဂြိုလ်သားခြိမ်းခြောက်မှုများကိုစစ်တိုက်ခြင်းမှ ပို. ပင်သင့်ရဲ့စက်သေနတ်အဘို့စွမ်းအား, ShotGun နှင့်အခြားအာကာသသေနတ်သမားရယူပါ! သေနတ်ထွက်နေတဲ့, ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကိုနှင့်မိုင်းအပါအဝင်လက်နက်နှင့်ဂီယာအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပြန်ပေးလော့ဝင်ငွေ။ သငျသညျတိုက်ပွဲတွေအစွန်းပေးရအာကာသသေနတ်သမားတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်များများစွာ Unlock ။
ဧရာ Boss ဖကျြဆီး
ရန်လိုစက်ရုပ်ကျူးကျော်များနှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ် Hornet, စစ်တိုက်အာကာသအကြီးအကဲတွေ, အားဖြည့်ဒိုင်းနှင့်အစွမ်းထက်ရောင်ခြည်ပေါက်ကွဲမှုများအပါအဝင်ထူးခြားသောထိုးစစ်နှင့်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များနှင့်အတူအသီးအသီး venomous မှဧရာမ mechs မှ။ ဂြိုလ်သားသေနတ်သမားအရေးယူဂိမ်းများကိုဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး!
Dynamic ရည်ရွယ်ချက်များ SYSTEM
ခိုးယူ disk တွေ Recover, စုံစမ်းစစ်ဆေးခုခံကာကွယ်, ပြုပြင်ပြန်ပေးလော့ဝင်ငွေနဲ့ဂီယာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု RPG ဂိမ်း aventure သော့ဖွင့်ဖို့ယာဉ်နှင့်ပြည့်စုံမစ်ရှင်ပျက်ကျသွားသည်။ သငျသညျမစ်ရှင် play အခါတိုင်းအသစ်သောရည်ရွယ်ချက်များ, ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့အာကာသသေနတ်သမားစွန့်စားမှုရှိသည်။
သုံးအခက်အခဲအဆင့်ဆင့်အတွက်အရသာရှိတဲ့ပြန်ပေးလော့နှင့်အတွေ့အကြုံရရှိရန်အလုံးအရင်းသည် Modes အတွက်ဂြိုလ်သားကျူးကျော်များ၏ ပို. ပို. ခက်ခဲလှိုင်းတံပိုးဆန့်ကျင်ကထွက်တိုက်ဖျက်: ပုံမှန်ခက်နှင့်ငရဲ။ Space ကိုရှေ့ဆောင်နဲ့တူလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစစ်ပွဲဂိမ်းမလွယ်ကူသော mode ကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဆုံးမဲ့အာကာသမုဆိုးပျော်စရာပဲ!
ဒီစိတျလှုပျရှားစရာအာကာသ RPG ၌သင်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများသင့်ရဲ့အရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အာဏာကိုတက်တိုးမြှင့်ဖို့သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်း Customize နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်အားဖြင့်သင်တို့ကို, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ End User License Agreement ကိုလက်မခံ: http://support.vividgames.com/policies
အဆိုပါအဖွဲ့ချုပ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုယခုအွန်လိုင်းများမှာ - သင်တို့သည်ငါတို့၏ဖိုရမ်များသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်စာပို့ခြင်းစနစ်ကနေတဆင့်တခြားရှေ့ဆောင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရယူတဲ့အခါသင်ထားတဲ့အညွှန်းကိန်းအရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုလည်းတစ်ဦးတပ်လှန့်မှုစနစ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Galactic မြေပုံ menu ထဲက "လူမှုရေးအချက်အချာ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Space ကိုရှေ့ဆောင်: အများအပြား PvP ဂြိုလ်သားသေနတ်သမား
87.09 ကို MB